Ozugbo i nwere gị digitized video faịlụ, e nwere ihe abụọ na ọtụtụ ndị na-dị mkpa ka e mere, edezi, na converting n'ime a kwesịrị ekwesị usoro. Na-achọ na faịlụ akakabarede anyị na-ahụ a na nnukwu ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ mmemme dị, ụfọdụ ndị na-agụnyekarị edezi ọrụ na-mkpa dị ka nke ọma, na nso si dị oké ọnụ na mgbagwoju ọkachamara nchịkọta site kpamkpam free, nnọọ mfe iberibe software na dị nnọọ ime onye ọrụ. Ịchọta ngwugwu nri n'ihi na ị bụ a siri ike usoro na nke ukwuu na-ahọrọ, n'ihi ya, anyị ga-ele anya na-achọta ndị kasị mma nke convertors si n'ebe.
Hugely oké ọnụ, ọ bụ ezie ọhụrụ kwa ọnwa mgbazinye otú ibelata mmetụta a obere, Adobe Premiere bụ zuru on ọkachamara video ngwugwu, na-abụghị maka onye ọ bụla, ma n'ihi na ndị na-achọ na-emepụta ọdịnaya maka azụmahịa oriri nke a bụ ngwá ọrụ. Ọ nwere ike na mbubata media kpọmkwem site a kpọọ ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ, dezie ya na mmepụta na mara mma nke ukwuu ọ bụla usoro ị chọrọ, na-agbakwunye na ọkachamara larịị mmetụta, utu aha na na dị ka ị na-aga dị ka mma.
A dịtụ nkpoda mmụta usoro, ma ọ dịghị ihe ọzọ na-abịa nso arụmọrụ a nchịkọta na-enye gị na-ewetara gị ihe echiche ndụ.
2. Xilisoft Video Ntụgharị
A nnọọ mfe ngwugwu, ma wezụga akakabarede ikike, nke bụ sara mbara, ndị Video Ntụgharị na-agụnye isi edezi ikike, gụnyere clip, jikota na gbawara n'etiti faịlụ, tinye ndepụta okwu na watermarks nakwa dị ka ndị ọzọ soundtracks. Ọ dịghị ihe dị ka Adobe ngwugwu ndammana, ọ retails maka gburugburu 5% nke price nke premiere mgbe niile, ma iji ekpuchi mkpa nke a nnukwu Nkezi nke ọrụ. The mfe bụkwa a uru na usability, software bụ n'ụzọ kwụ ọtọ ịghọta na-emepụta oké results si.
3. ImToo Video Ntụgharị
Onye a na-agba a pụtara ìhè oyiyi ahụ Xilisoft àjà, gụnyere ndakọrịta na n'elu 150 faịlụ formats, mfe akakabarede workflow na ụfọdụ bụ isi edezi atụmatụ gụnyere gbawara n'etiti ma jikota, nakwa dị ka na-agbakwunye ka oyiyi n'ime video na adịrị oyiyi si video, bara uru n'ihi na thumbnails na na. Specific ntọala maka converting gị video ka ga-eji na iPads, iPhones, PS3, Android ngwaọrụ, Xbox na Nintendo egwuregwu igwe, converting gị footage n'ime ihe usable na chọrọ ngwaọrụ bụ mfe onwe ya.
4. Ọ bụla Video Ntụgharị
Onye a-enye gị ohere weghara, dezie ma tọghata n'ime onye ngwa, na-eme workflow n'ihi na gị 8mm footage nnọọ mfe. Otú ọ dị, o nwere ụfọdụ n'ezie mma etinyekwu na gbatịa karịrị nke ahụ usoro, ekwe ka ị na ọbụna ọkụ gị footage ka DVD nke ga-egwu na-ọ bụla ọkpụkpọ ka nke ọma, ọzọ si na n'ime otu ngwa. A nnọọ keukwu ngwugwu na-enye gị ohere ngwa ngwa buru gị 8mm footage, ingest ya, dezie ya na mmepụta ya na ọ bụla usoro ị pụrụ chọrọ.
5. Movavi Video Ntụgharị
A mara mma mma n'ebe a, ma pụta ìhè bụ ndị na-agba, ọ na-azọrọ tọghata video ruo iri asaa ugboro itoolu ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla ọzọ. M na na na banyere nọmba, ma ọ bụ otú ahụ ngwa ngwa na converting karịa ọzọ nchịkọta ebe a, ma ọ bụrụ na-agba bụ dị gị mkpa, nke a bụ ezi nhọrọ.
Ndị ọzọ karịa nke ahụ, anyị nwere maara 150 gbakwunyere faịlụ formats, isi edezi ụlọ ọrụ na presets maka iche iche mobile ngwaọrụ ka ị na-ahọrọ na ezi usoro mfe.
6. Leawo Total Media Ntụgharị Ultimate
Ultimate bụ zuru apụta mbipute a software, Otú ọ dị, e nwere ubé egbutu version kọrọ DVD ọkụ na ole na ole ndị ọzọ mmepụta nhọrọ maka a belata price, otú i nwere ike ịkwa akwa gị outlay gị mkpa ebe a. Onye a na-ekwe nkwa ihe karịrị 180 akwado faịlụ formats na presets n'ihi na onye ntị, dị ka Galaxy S na iPhone, na-eme ka mma n'iji ha meziri.
Ebe i nwere ike na-mmepụta kpọmkwem ka DVD na inbuilt DVD burner zuru ezu na menus, na ọbụna na-arụ ọrụ Blu-ray disks dị ka mma.
A keukwu, ọ bụrụ na ubé oké ọnụ ngwugwu, na, maka n'ji larịị na ngwaahịa na dịghị ihe ọzọ, widest nso nke akakabarede formats, na ọ dị mma dị ọcha interface na-aga na ihe dị mfe ịghọta workflow na-eme ka ahụ dum usoro mfe onwe ya.
7. NCH Software prism Video Ntụgharị
Onye a bụ dịtụ ọhụrụ na na ọ bụ mara mma nke ukwuu dị nnọọ a Ntụgharị na ihe ọ bụla ọzọ. Otú ọ dị, ọ bụkwa free iji (na azụmahịa version awards ị na ihe formats n'ihi na gị mmefu). Dị ka ndị dị otú ahụ, ọ na-adịghị anya a obere kọrọ atụmatụ ebe a, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata gị video faịlụ n'ime otu n'ime ndị ọzọ ejikarị, nke a ka ọ na-adị mfe na rụọ ọrụ nke ọma na obere nsogbu oge na ọ na-eri.
Dị ka ndị dị otú ahụ ọ na-anọchi a bara uru nhọrọ maka ọtụtụ ndị, ndị na-adịghị mkpa ma ọ bụ na-achọ nhọrọ dịgasị iche iche n'ihu site ndị ọzọ.
8. AVS Video Ntụgharị
Onye a merie ọtụtụ enọ, na ọ dị mfe ịhụ ihe mere, na oké, mfe ịghọta interface na a sara mbara nso nke atụmatụ ọ na-enye ihe niile nwere ike ị chọrọ gị akakabarede software.
Na a na nnukwu ọnụ ọgụgụ nke formats dị gụnyere presets ka mmepụta ihe dị iche iche kpọmkwem ngwaọrụ dị ka iPhone, Kindle na na, ikike ọkụ gị converted faịlụ ozugbo a DVD ma ọ bụ Blu-ray na inbuilt edezi arụmọrụ, AVS awade kasị atụmatụ ị pụrụ chọrọ iji tọghata gị 8mm nkiri.
9. Total Video Ntụgharị
Ọzọ n'ụzọ zuru ezu na-apụta ngwugwu ekwe ka ị na ingest gị footage si a kwesịrị ekwesị kpọọ ngwaọrụ, dezie ya, tọghata ya ọ bụla usoro ị chọrọ na mmepụta dị ka otu faịlụ ma ọ bụ ọbụna a DVD ma ọ bụ Blu-ray.
Ebe ọ ọkụ ndị ọzọ maka atụmatụ, ọ dịghị ikekwe enweghị a obere ke aesthetic ngalaba, na ọ bụ ezie na nke a na ọ dịghị ụzọ detracts si arụmọrụ, ọ bụ uru banyere dị ka interface nwere ike ịbụ mkpa n'ihi na ụfọdụ. A sara mbara nso nke format ndakọrịta na irè akakabarede workflow ka software mfe na oru oma iji Otú ọ dị, n'ihi ya, ọ bụ uru a anya.
N'ụzọ dị iche na nke ikpeazụ, Pavtube nwere nnọọ mma, oge a achọ interface, na ndị ọzọ karịa nke a ọ Akwadoo ya na a zuru atụmatụ set, àjà a nnukwu dịgasị iche iche nke usoro ndakọrịta, isi edezi ngwaọrụ na ikike mmepụta na DVD na Blu-ray usoro (ma n'adịghị ndị ọzọ, ọkụ na media).
Ọ bụ ezie na-efu a di na nwunye nke atụmatụ nke ụfọdụ ebe a, ọ bụ ka a oké ngwugwu na uru a anya.
Dị ka anyị na-ahụ, e nwere ọtụtụ ngwaọrụ si n'ebe aka tọghata gị video ozugbo na ị nwere ya digitized, site ọkachamara ngwugwu (na metụtara price mkpado) nke Premiere ka free iji prism, na dị nnọọ banyere n'ebe nile n'etiti. Ọ bụrụ na gị akakabarede mkpa bụ maka pụtara nkịtị faịlụ formats na-eji na ụbọchị ọ bụla ngwaọrụ, ihe niile ebe a nwere ike nweta na n'ihi unu, nke onye ị na-emecha na-ahọrọ ga-ala ọ bụla mmezi chọrọ na onye uto.
Get a Free MP4 Ntụgharị enweghị Watermark
Olee otú iji tọghata MP4 ka VOB
Olee otú iji tọghata 3GP ka MOV (QuickTime)
AVI ka MOV Ntụgharị: Olee otú iji tọghata AVI ka MOV (QuickTime)
> Resource> tọghata> Top Iri Best 8mm Kpatụ converters / Super 8 Video converters